Ama-Atom abekelwe ukwethula amarekhodi aqapha i-NEON 17 ”ne-NEON 24” ngoNovemba 2020 | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Ama-Atomos azimisele ukwethula amarekhodi aqapha i-NEON 17 ”ne-NEON 24” ngoNovemba 2020
Ama-Atomos azimisele ukwethula amarekhodi aqapha i-NEON 17 ”ne-NEON 24” ngoNovemba 2020
I-Atomos kujabule ukwambula ukuthi ama-qopha-rekhoda we-NEON 17 ”ne-NEON 24” azoqala ukuthunyelwa ngoNovemba 2020. Kusukela isimemezelo sayo sokuqala eCinegear 2019, I-Atomos inikelwe ukuzwa kusuka kubasebenzisi bokuqala kanye nomphakathi wayo othembekile. Ngakho-ke, selokhu yethulwa ngo-2019, uchungechunge lwezinguquko selwenziwe ukuqinisekisa ukuthi I-Atomos ihlinzeka ngokuqapha okuphezulu okuphezulu ngokuqopha okusebenza ngaphandle komthungo kuzimo ezahlukahlukene kusuka kusitudiyo / ukuqapha kokukhiqizwa kokubonakalayo kuya ekuhlolweni kombala okunembile.
Uchungechunge lwe-NEON luzoqala ukuthunyelwa ngosayizi ababili, i-17 "kanye ne-24" eqinisekisa ukubhekana nesidingo esikhuphukile sokuqapha okunembile kukho konke ukukhiqizwa kanye neposi. Ukutholakala nokungaguquguquki kukho konke ukuqapha kuvumela bonke ababambe iqhaza bezithombe ukuthi batholile futhi bagcina inhloso yokudala. Osayizi ababili balungele; 17 ”ye-Focus Pullers, ikhabethe le-gaffer nanjengeqapha lokukhiqiza lezinhlelo zokuhlela ze-laptop. I-24 ”ilungele isigodi samavidiyo, i-DIT, i-cinematographer, inikezela ngomqapha onembile futhi ongabizi kakhulu wokukhishwa kwesicelo se-NLE nokufaka uhlelo ngamadivayisi ejwayelekile we-I / O wevidiyo. Ukuthuthukiswa kwe-NEON 31 "no-55" okwamanje kuyaphenywa, njengoba I-Atomos hlola impendulo evela kubasebenzisi bemboni yethu ngokuthi bangena kanjani ekushintsheni kokugeleza kokusebenza kokukhiqizwayo okukhiqizwayo nokwenziwa kude.
I-NEON 17 ”ne-NEON 24” inikezela ukuqapha okunembile nokungaguquguquki kwe-SDR / HDR futhi inikeze ukusebenza kokurekhoda kokubuyekezwa kokuthwebula okulula noma inikeze ukulethwa kokukhipha kwamahhala ku-Apple ProRes noma Avid I-Dnx ifinyelela ku-4k DCI 60p. Esebenziseka kalula estudiyo, ekuhlelweni noma ekusetshenzisweni okukude kokusebenza zonke izikrini zilinganiselwe ifektri noma zingalinganiselwa kalula umsebenzisi ngekhebula lokulinganisa le-USB kanye neXrite i1 Display Pro Plus.
Ukukhanya Okugcwele kwesikrini ngabamnyama abajulile nombala obanzi we-gamut
INEON 17 ”isebenzisa iphaneli le-FHD 1920 x 1080 nge, 10bit display processing, 4k to HD ukukala nokukhethwa kukho kwemephu ye-pixel engu-1 kuye ku-1 INEON 24 ”isebenzisa iphaneli lokuxazulula elihle le-4k DCI ngokuthembeka kwe-True 10bit futhi HD/ 2k ku-4k UHD / DCI upscaling evikela izindlela zokuhumusha. Kokubili ukukhonjiswa kwe-NEON kufaka ubuchwepheshe obukhanyayo be-Back Array Local Dimming (FALD) ukuletha abamnyama abajulile ku-1000Nits full screen HDR peak brightness. Inhlanganisela yokubonisa ukufana, i-engeli yokubuka ebanzi ebanzi ye-180 degrees H / V kanye ne-Dynamic Contrast ratio engu-1,000,000: 1 inikezela ngemininingwane kuzo zombili izithunzi kanye nokuvelele okumangazayo, okuvumela ukukhazimula kwezithombe zakho kukhanye ngokweqiniso.
Ipayipi Lokukhonjiswa Eliphethwe Umbala
Injini ye-AtomHDR inikeza amandla okuphatha kahle okokufaka kwakho futhi ibonise i-Gamma / Gamut. Izindlela zokuqapha ezikhethiwe zikuvumela ukuthi usebenze kuzilungiselelo ze-SDR noma ze-HDR, ezifanisa zombili izilungiselelo zokutholwa kwekhamera, noma amazinga wokuthumela achaziwe afaka iRec. 709, Rec. 2100 HLG noma i-ST.2084 PQ. I-NEON inikeza umbala wendabuko onembile nge-DCI-P3 efakwa nge-Wide color Gamuts, njenge-BT.2020, icutshungulwa ngokunembile yinjini ye-AtomHDR ukuletha izethulo ezingaguquguquki. Eyakhelwe ekuguqulweni, vumela ukuguqulwa kwe-LOG ibe yi-HDR EOTFs ukuze iboniswe ku-NEON noma ekusakazeni ezansi kube ngabaqaphi bamakhasimende noma basebenzise ama-3DLUTs e-SDR, ukuqapha ngombukiso ocacisiwe BHEKA noma ukuphrinta okuveziwe phansi.
I-O / O eguquguqukayo futhi ethuthukiswayo
Isisekelo seplatifomu ye-NEON siyindlela esetshenziswayo eqinisekisa ukuthi i-I / O yokuqapha kulula ukuyigcina, ukuyibuyisela futhi ekugcineni ithuthukise ngaphandle kokukhipha iphaneli kukhomishini. I-Master Control Unit (MCU) ubuchopho be-NEON ngokusekelwa kwe- I-HDMI 2.0 yakho kokubili nokungena, okunikeza ukusekelwa kokufakwa kwevidiyo ku-4096 x 2160 4k DCI kuze kufike ku-60p. I-firmware ye-MCU ithuthukiswa kalula futhi ivumela ukulayishwa nokugcinwa okufika ku-8 x 3D LUTs kwimemori yangaphakathi noma kungasebenzisa i-2.5 ”HDD noma i-SSD ukugcina umtapo wolwazi ongenamkhawulo ongalayishwa kalula kwi-NEON nge AtomOS I-APP ku-iOS. I-MCU inikela ngezinga lesibili lokuxhuma nge-Xpansion port futhi i-NEON ifaka imodyuli ye-AtomX SDI enikezela nge-2 x 12G SDI. Amachweba alungisekayo avumela ukufakwa kwevidiyo efinyelela ku-4k60p ngokuxhaswa okuhambisanayo okuya emuva kwesixhumanisi esisodwa noma esimbili i-1.5G / 3G / 6G SDI noma amandla okuguqula phakathi kwamakhamera we-A no-B. Ukuqanjwa kwefayela nakho kuyasekelwa kuwo womabili amakhamera we-RED ne-Arri avumela ukuqoshwa kommeleli webhodi okulula ngekhodi yesikhathi enembile namagama wefayela afanayo.
Eyakhelwe ku-NEON yi-LE Bluetooth, enikeza amandla wokusebenza okukude kwe-NEON nge-AtomRemote OS evela kumadivayisi we-Apple iOS asebenzisa inguqulo 12 noma ngaphezulu. Ukuthuthukiswa kuyaqhubeka ukwandisa ukuphathwa kwe-NEON kwamanye amadivayisi.
Izindlela zokurekhoda nokudlala
Xhuma amakhamera noma yimuphi umthombo wevidiyo nge-SDI, esekela kuze kufike ku-4k DCI 60pvia 12G noma i-Dual 6G noma izinqumo eziphansi namazinga wozimele nge-1.5 / 3G SDI eneziteshi eziyi-12 zomsindo oshumekiwe. Ukurekhodwa kungadlalwa kalula emuva futhi kubuyekezwe ngaphandle kokudinga ukwethula imidiya noma ukukhipha ikhamera kwimodi yokuqopha.
I-HDMI amasiginali angenayo i-HDCP asekelwa kuze kufike ku-4k60p noma HD I-120fps eneziteshi ezifika kwezingu-8 zomsindo nokutholwa kohlaka lolwazi lwe-HDR ukufanisa ngokuzenzakalela uhlobo lwesiginali yokufaka.
Ukuqoshwa okungu-10bit 422 kufakwa kuma-Apple ProRes ajwayelekile embonini we Avid I-DNx Codec isebenzisa i-Scene / Shot / Thatha ifayili noma i-RED / Arri efayela eliqanjwe ngemethadatha ecebile efakwe kufayela elingasetshenziswa uhlelo lwakho lwe-NLE noma lwe-MAM lokuhlelwa kwempahla.
Lapho kukuhlela i-NEON yakhelwe ukuxhuma nge I-HDMI noma i-SDI kuwe NLE noma uhlelo lokugreda I / O ukuhlinzeka nge-10bit baseband ukuqapha lokhu akuthinteki yikhompyutha OS noma iphrofayili ye-ICC ukuqinisekisa ukuqapha okunembile okuvela kuzo zonke izinhlelo ezihola kuzo zombili i-SDR ne-HDR.
Umhlahlandlela Wozimele ne-Anamorphic De-squeeze
Imihlahlandlela yohlaka lokusakaza enenketho yezindawo eziphephile ze-EBU R5 Graphic and Action ingavunyelwa ukuboniswa esikrinini. Imihlahlandlela yeCinematic nayo iyatholakala futhi ingasetshenziswa eceleni kwemodi ye-anamorphic de-squeeze ngokuxhaswa kwe-2x, 1.5x ne-1.33x ukukuvumela ukufanisa amalensi ahlukahlukene.
NEON 17 ”- 3699 EUR / $ 3999 - Iyatholakala ngoNovemba 2020
NEON 24 ”- 5999 EUR / $ 6499 - Iyatholakala ngoNovemba 2020
Njengephromoshini yokwethulwa ye-LIMITED-EDitions NEON 17 "ne-NEON 24" izokwethulwa kumakhasimende endiza eyenziwe nge-HPRC.
Sicela ubheke ividiyo yedemo yeyunithi lapha: lettu.be/olXLZU5YXtM
4K ama-athomu HDR qapha-abaqopha I-SDR UHD 2020-11-19
Ngaphambilini: AbakwaTelstra Bethula Ingxenyekazi yeTelstra Octagon Ukusheshisa Ukuhweba Kuwo Wonke Amazwe ayisishiyagalombili Okuhwebelana
Olandelayo: UZixi Umemezela Ubambiswano ne-Google Cloud